अभिनय सँगसँगै पढाईमा समेत अब्बल नेपाली चलचित्रकि ६ नायिका ! - Malayakhabar
होम पेज महत्त्वपूर्ण ज्ञानगुणका कुराहरु अभिनय सँगसँगै पढाईमा समेत अब्बल नेपाली चलचित्रकि ६ नायिका !
महत्त्वपूर्ण ज्ञानगुणका कुराहरु
अभिनय सँगसँगै पढाईमा समेत अब्बल नेपाली चलचित्रकि ६ नायिका !
धेरैलाइ लाग्नेगर्छ नेपाली चलचित्रको कलाकारहरुले पढेकै छैनन् । खास गरेर नायिकाहरू प्रति त झन् मानिसले नराम्राे नजरले हेर्छन् । यद्धपी केही नेपाली नायिकाहरुले हामीले सोचेको भन्दा धेरै पढेका छन् ।
हामिले नेपाली चलचित्रकि ६ जना कलाकार जसले धेरै पढेका छन्, तिनीहरुकाे चर्चा गर्दैछाै।
नायिका ऋचा शर्माले लिटिल एञ्जल स्कुल हात्तीवनबाट स्कुले जीवन प्रारम्भ गरेकी थिइन् । पछि गोल्डेनगेटबाट ब्यवस्थापनमा स्नातकोर गरेकी छिन् । उनले यस बाहेक जर्मनी र फ्रान्सबाट कलाकारिता सम्बन्धी अध्ययन गरेकी छिन् । जिवन्त अभिनय गर्ने क्षमताकी धनि ऋचाले नेपाली रजतपटमा ‘फस्ट लभ’ चलचित्रबाट पाईला टेकेकी थिइन् । जुन सर्वधिक सफल चलचित्र मानिन्छ।
कहिले सगरमाथा चढेर त कहिले कपाल पूरै मु ण्डन गरेर चर्चामा आईरहने निशा अधिकारी पछिल्लो समय नेपाली क्रिेटर शरद भेष्वाकरसंग विवाह गरेर नयाँ जिवन बिताइरहेकी छन् । उनले फिल्म र सामाजिक विज्ञानमा स्नातक सम्मको अध्ययन गरेकी छिन्।
नेपाली चलचित्रकी ‘अप्सरा’ संचिता लुईटेल पछिल्लो समय चलचित्रमा देखिएकी छैनन् । निखिल उप्रेतीसंग दोश्रो विवाह गरेर दुई सन्तान जन्माएकी उनले बागबजारको पद्मकन्या क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा एम ए गरेकी छिन्।
नायिका प्रियंका कार्की नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी एक चर्चित नायिका हुन् । उनी हाल नायक अायुसमान देशराज श्रेष्ठसँग बिवाह गरेर नयाँ जीवनकाे सुरुवात गरेकि छि्न् । उनलेले अमेरीकाको युनिर्भसिटी अफ अलबामाबाट चलचित्रमा डिप्लोमा गरेकी थिइन्।
मसान चलचित्र खेलेर वाहीवाही बटुलेकी केकी अधिकारी नेपाली चलचित्र क्षृेत्रकी चर्चित नायिका हुन् । फिल्म निर्देशक बद्री अधिकारीकी छोरी भएका नाताले पनि कलिउडमा उनको इज्जत नगर्ने भेटीदैँनन् । नायिका केकीले हुमन रिर्सोस म्यानेजम्यान्टमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन्।
चलचित्र खेलेर भन्दा पनि मोडलिङ र कार्यक्रम चलाएर हिट बनेकी रिमा विश्वकर्माले पिनाकल एकेडेमीबाट अंग्रेजी र मास मिडियामा स्नातक गरेकी छन् । पछिल्लो समयमा रियालिटी सो नेपाल आईडलको प्रस्तोता हुँदा उनले धेरैको मन जितेकी थिइन्।
अघिल्लो लेख कंगना एक लडाकु महिला: जसले हल्लाउँदैछिन् भारतीय राज्यसत्ता।
पछिल्लो लेख थारु समुदायको घर घरमा जितियाको रौनक सुरु, तर कोरोनाले रमझम र नाचगान बन्द।
रोहितसँग मिलेर चलचित्र बनाउँदै दीपक-दीपा।
एमसिसीबारे करिश्माको धारणा।